Tetsy Andravoahangy no nitrangan’izany, ny alatsinainy lasa teo. Araka ny fanazavana voaray, matetika miady izy mivady. Tezitra ilay rangahy, ka lasa nampirafy ny vadiny izy.Hitan’ity farany tao anaty findainy ny soratra maro sosona na sms ny sakaizan’ilay rangahy. Tsy nahatanty ny nijery izany ilay ramatoa, ka nalainy avy hatrany io fanafody io, ka nosotroiny ary teo imason-janany izy no nandrapaka izany.Nampandre ny olona teo amin’ny manodidina ny zanak’ilay ramatoa, ka namonjy azy. Nampandoavina tamin’ny atody izy ary rehefa nahazo aina kely dia nentina tany amin’ny hopitaly Hjra ary nalady voavonjy. Tezitra kosa ilay rangahy vantany vao nahare fa namono tena ny vadiny.